Ahoana ny fomba hanokafana dispensary any Ohio - Dispensaries an'ny mpitsabo marijuana any Ohio
Liana te hahay hanokatra dispensary rongony any Ohio ve ianao? Ity pejy ity dia hitazona anao haharaka ny vaovao farany sy ny fivoaran'ny sehatry ny rongony any Ohio.
Tamin'ny 9 Jona 2016, ny governoran'i Ohio dia nanasonia ny HB 523 ho lalàna, manome alalana hametraka programa marijuana ara-pitsaboana. Nanome an'i Green ny jiro maitso hamoronana politika marijuana ara-pitsaboana vaovao. Ny Application Phase I Cultivator Application dia navoaka tamin'ny volana aprily 2017.
Raha efa nieritreritra ny hanokatra dispensary marijuana ara-pitsaboana any Ohio ianao dia fotoana mety hanombohana izao. Ireto ny zava-dehibe indrindra tokony tadidio momba ny fanokafana dispensary any Ohio.
Manokatra Dispensary Marijuana Mpitsabo ao Ohio
Ny biraom-panjakana fivarotam-panafody (BOP) dia tompon'andraikitra amin'ny fanaraha-maso ireo trano fivarotana marijuana ara-pitsaboana, ny fisoratana anarana amin'ireo mararin'ny marijuana ara-pitsaboana sy ny mpitsabo, ny fankatoavana ireo karazana marijuana ara-pitsaboana vaovao ary ny fandrindrana ny Komitin'ny Mpanolo-tsaina marijuana.
Costs hanokatra ny varavaranao dia mety mitentina 500,000 $ mihoatra ny tapitrisa arakaraka ny vidin'ny trano sy tanyary ny haben'ny fandidiana.
Zava-dehibe ny fahalalana an'izany tizy ny Board of Pharmacy any Ohio, izay manara-maso ireo dispensary marijuana any Ohio, dia vonona ny hanitatra ny isan'ireo dispensary ao Ohio from 57 ho 130.
Ny talen'ny mpanatanteraky ny fivarotam-panafody any Ohio, Steven Schierholt, dia nilaza tamin'ny Birao fa nanoro hevitra izy ireo ny hanombohany fangatahana fangatahana fampiharana izay hanampy 73 ireo fizarana marijuana vaovao ho an'ireo 57 efa nankatoavina tao Ohio. Izany dia hahatratra 130 ny dispenseram-panjakana.
FIVAVAHANA MISY: FOMBA HANOKAFANA DISPENSARY INY YORK Vaovao
Fepetra takiana fahazoan-dàlana hividianana marijuana any Ohio
Mba hahazoana fahazoan-dàlana Marijuana ara-pahasalamana dia tokony hoheverinao izao manaraka izao
Raha ny lalàna velona ankehitriny dia tsy mihoatra ny 57 ny lisansa dispensary no homena ny fanjakana manontolo (na dia mety hiova izany ato ho ato);
Ny dispensaire dia mety tsy latsaky ny 500 metatra miala amin'ny sekoly, fiangonana, trano famakiam-boky ampahibemaso, kianja filalaovana ho an'ny daholobe na zaridainam-panjakana ary koa miantoka antoka;
Ny toerana dia tokony hihaona amin'ny lalàna momba ny zon-toerana eo an-tanàna sy faritaniny;
Ny mpangataka dia tsy maintsy manome porofo fa ny mpangataka dia manana fananana ranoka ampy hanefana ny fandaniana sy ny vidiny amin'ny taona voalohany latsaky ny $ 250,000.
Fepetra takiana amin'ny famatsiam-bola any Ohio
Sarany fampiharana: $ 5,000
Saran'ny fahazoan-dàlana: $ 80,000
Fanavaozana isan-taona: 80,000 XNUMX $
Saram-pandraharahana momba ny fandidiana 70,000 XNUMX $
Fanavaozana isaky ny roa taona ny saram-pitsaboana 70,000 XNUMX $
Fanavaozana isaky ny roa taona ny saram-pianakaviana manan-danja 500 $ karatra
Fanavaozana isaky ny roa taona ny saram-pividianana karatra lehibe ho an'ny mpiasa $ 250
Fanavaozana isaky ny roa taona ny saram-pianakaviana fanampiana $ 100 $
Ny taratasy fanamarinana fandefasana na karatra famantarana ny mpiasa 50 $ naverina
Fanovana ny saram-pananana 5,000 $
Vola famindrana toerana 5,000 $
Fanovana lehibe na saram-panavaozana $ 5,000
Amin'izao fotoana izao, tsy misy varavarankely fisokafana misokatra, na izany aza, fotoana fohy ihany mandra-pisokafan'ny varavarankely indray ary afaka manomboka manao fangatahana vao haingana ianao, hoy ny talen'ny birao ao amin'ny biraon'ny fivarotam-panafody any Ohio, Steven Schierholt, nanoro hevitra ny birao fa tokony hanomboka fangatahana fangatahana fampiharana izay hanampy 73 Dispensary Marijuana ara-pitsaboana vaovao amin'ireo 57 efa nankatoavina ao amin'ny fanjakana.
Miaraka amin'ny antony manosika sy fidirana amin'ny loharano ilaina, ny biraonay dia afaka manampy anao amin'ny fomba mahomby manomboha dispensary rongony mahasoa ao Ohio. Na dia zava-dehibe aza ny manamarika fa ity dingana ity dia mitaky fotoana na dia manana ny enti-manana aza ianao.